Maamulaka Gobalada Dhexe Ee Ahlu Suna Iyo Liibaan Madexweyne Oo Hashiis Gaaray – STAR FM SOMALIA
Liibaan Maxamuud Yuusuf (Liibaan Madaxweyne) oo Axadii isku soo dhiibay Maamulka Ahlu Sunna, ayaa aqbalay in hubka iyo ciidanka uu wato uu ku wareejiyo Maamulkaasi.
Labada dhinac oo wada hadalo ka lahaa arrintan, ayaa waxay ugu dambeen ay fiidnimadii caawa kala saxiixdeen heshiis cadeynaya, in uu aqbalay hubka iyo ciidankuba inuu ku wareejiyay Maamulka Ahlu Sunna.
Afhayeenka Maamulka Gobolada Dhexe, Mursal Maxamed Xeefow, ayaa Magaalada Dhuusamareeb ugu akhriyay Saxaafadda heshiiskan, oo sida uu sheegay ay wada saxiixeen Ahku Sunna iyo Liibaan Maxamuud Yuusuf.
Afhayeenka, ayaa cadeeyay in caawa ka dib uu Liibaan Maxamuud Yuusuf ka mid yahay Saraakiisha Maamulka Ahlu Sunna, oo isu magacaabay Maamulka Gobolada Dhexe. Sidoo kalana ciidankiisii inay ku xuquuq yihiin Ciidamada Ahlu Sunna.
Mursal ma sheegin tirada ciidanka iyo inta uu le’eg yahay hubka uu wato Liibaan Madaxweyne, marka laga soo taggo inay si toos ah ugu soo biireen Ciidamada Ahlu Sunna.
Liibaan Madaxweyne oo ka barbar hadlaayay Afhayeenka Maamulka Ahlu Sunna, ayaa xaqiijiyay in uu si rasmi ah ugu biiray Maamulkaasi, isla-markaana uu heshiiskan yahay mid uu ku faraxsan yahay, sida uu yiri.
Sidoo kale waxa uu sheegay inuu soo dhaweynayo in uu ku biiro Maamulkan, oo uu ku sheegay mid ay hal cadow wada lee yihiin, uuna garowsaday inaanay dhexdooda hubka isku qaadan, oo cadowga uun lala dagaalamo.
Ma aanu soo hadalqaadin inta ay dhan yihiin askartiisa iyo weliba hubka ay wataan, balse wuxuu cod kore ku sheegay in caaradda hubka uu ku foorarin doono Ururka Al Shabaab.
Liibaan Madaxweyne oo Axadii la hadlay Warbaahinta, ayaa sheegay inuu wato afar ka mid ah gawaarida dagaalka iyo 120 oo askari ah.
Safiirka Soomaaliya U fadhinaayo Turkiga Ayaa Laga Gudoomay Warqadahiisa Aqoonsiga(Daawo Sawirada)